चुनावी अभियान र एकताको प्रश्न – Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / विचार / चुनावी अभियान र एकताको प्रश्न
चुनावी अभियान र एकताको प्रश्न
4 weeks ago विचार Leaveacomment
२०६२/६३ सालतिर नेपालमा हुँदा घर नजिकका एक साथी अमेरिका ओहोरदोहोर गरिरहन्थे । उतिबेला नेपालबाट अमेरिका आउने हुट्हुटी धेरैमा हुन्थ्यो । एक दिनको जमघटमा मैले उनलाई सोधें– ‘कस्तो छ अमेरिकामा नेपाली समाज ?’ उनले उत्तर अनपेक्षित दिए– ‘नेपाल जस्तै । रिस, इष्र्या, राजनीति अनि बेइमानी ।’
नेपालमा रहँदा हामी धेरै साथीहरुको सोचाइमा अमेरिका एक उत्कृष्ट देश भन्ने त छँदै थियो । अनि अमेरिका पुग्ने नेपालीहरु त समाजमा विशिष्ट नै हुने गर्थे । तर, अमेरिका बस्ने साथीको मुखबाट अमेरिकामा पनि नेपालमा जस्तै नेपाली–नेपालीबीच रिस, इष्र्या, राजनीति अनि बेइमानी छ भनेको सुन्दा हामी केही अचम्ममा परेको थियौं ।
यतिखेर अमेरिका बसेको पनि पाँच वर्ष नाघिसकेको छ । आजको दिनसम्म आइपुग्दा भने साथीको दश वर्ष अघिको भनाइ झलझल्ती सम्झना आउँछ । साँच्चै नै अमेरिकामा नेपाली समाज नेपालको समाज जस्तै विभाजित हुँदो छ । विभाजित मन, विभाजित राजनीति अनि विभाजित संस्कार यताको नेपाली समाजमा यत्रतत्र देखिन्छ । अझ यो विभाजनको रुप कोर्न यहाँका सामाजिक संघसंस्थाका उत्तराधिकारीहरु उद्यत् छन् । जसको उदाहरणमा एनआरएन अमेरिकाको दुई अध्यक्षका उम्मेदवारलाई नै पनि लिन सकिन्छ ।
प्रसंग अमेरिकी एनआरएनको
करिब ७/८ महिना अघिबाट एनआरएन अमेरिकाको चुनावी चर्चा बाक्लिएको थियो । अध्यक्ष प्रत्यासीहरु डा. केशव पौडेल, गौरीराज जोशी, रामसी पोखरेल, कृष्ण पोखरेल र रविना थापा पनि चुनावी अभियानमा नै छन् । तर पनि तुलनात्मक रुपमा पौडेल र जोशीको चुनावी अभियान नेपाली डायस्पोरामा टिप्पणी गर्ने ढंगबाट भइरहेको छ ।
सुरुवाती दिनमा डा. केशव पौडेलले अध्यक्ष पदका लागि गौरीराज जोशीलाई हौस्याएको बताइन्छ । गौरीको एनआरएनभित्र केन्द्रदेखि अमेरिकासम्मको सम्पर्क फराकिलो बनाउन केशव पौडेलको निकै मेहनत परेको जानकारहरु बताउँछन् । यी दुईबीचको लामो आपसी सम्बन्ध र सौहार्दताले पनि यी कुराहरु स्वीकार्छ । तर, अन्ततः चुनावी दौडमा नेतृत्वका लागि दुवै अगाडि आएका छन् । हुन त चुनाव हुने–नहुने कुरामा भने अझै ठूलो आशंका बाँकी नै छ । तर, जे–जसरी अभियानहरु अघि बढिरहेको छ । जे–जस्ता कामहरु भइरहेका छन्, एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने काम भएको छ । समूह नै बनाएर जसरी महिनौं दिनदेखि हिँड्ने काम गरिएको छ, अभियान चलाइएको छ । यसले आम नेपालीले खोजेको एनआरएन अमेरिका बन्न सक्नेमा शंका जन्माएको छ । आपसी मतान्तरले संस्थालाई बलियो नबनाई कमजोर बनाउने देखिन्छ । उम्मेदवारहरुबाट एकअर्कालाई कमजोर साबित गर्न नेपालमा निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलको आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि तल झरेको आभास आमजनमा भइरहेको छ ।
एनआरएन विधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार एनआरएन एक स्वतन्त्र, गैरराजनीतिक, गैरसरकारी, चिरस्थायी सामाजिक संस्था हो । यसको एउटै पवित्र उद्देश्य भनेको विदेश र स्वदेश दुवैतिर बस्ने नेपालीहरुको सेवा गर्नु हो । तर, हालसम्मको अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरुको गतिविधिले भने अब एनआरएन स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक रह्यो भन्ने कमै आधारहरु छन् । हालसम्मको चुनावी गतिविधिबाट भने नेपाली समाज नराम्रोसँग विभाजित भएको छ । विभाजित बन्दै गएको अमेरिकी नेपाली समाजलाई एकबद्ध गर्नुपर्ने आजको टड्कारो समस्या हो । चुनावमा व्यक्तिगत, राजनीतिक एवम् आर्थिक चलखेलहरुले नेपाली समाजलाई अझ विभाजित बनाएको छ । जसको भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।
Previous विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच एकता
Next लस एन्जलसमा भानुजयन्ती
एनआरएन अमेरिकामा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा जे–जस्ता दृश्यहरु देखिएका छन्, यसले …